Umphathiswa waseburhulumenteni wabulawa kwingozi yenqwelomoya eParaguay
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » Umphathiswa waseburhulumenteni wabulawa kwingozi yenqwelomoya eParaguay
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • IParaguay Iindaba Eziphambili • Safety • Technology • Tourism • uthutho • komzila Ngoku
Inqwelomoya ethwele uMphathiswa wezoLimo eParaguay ifunyenwe ngamaqela okukhangela kunye nohlangulo emva kokuba ilahlekile ngoLwesithathu ngokuhlwa.
Inqwelomoya ebithwele uMphathiswa wezoLimo eParaguay uLuis Gneiting ifunyenwe ngamaqela okukhangela kunye nohlangulo emva kokulahleka ngoLwesithathu ngokuhlwa, igosa elikwigunya lokuhamba ngenqwelomoya kweli lixelele unomathotholo walapha.
Inqwelomoya yafunyanwa kwi-6km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Ayolas, apho yasuka khona. Kwakusendleleni eya kwikomkhulu lelizwe, i-Asuncion, ngokwe-Luis Aguirre, intloko ye-National Civil Aviation Directorate.
Inqwelo moya yayithwele umphathiswa wezolimo kunye nabanye abathathu. U-Aguirre uthe akanalo ulwazi ngabagibeli.
“Intsalela yenqwelomoya yafunyanwa kumgxobhozo. Incam yomsila iyabonakala kwaye enye indiza iphantsi kwamanzi, ”utshilo u-Aguirre. "Ngokusekelwe kwinto esiyibonayo, kwaye oku akukho semthethweni, akukho basindileyo."
Usekela-mphathiswa we-Gneiting weenkomo, uVicente Ramirez, naye wayekhwele inqwelomoya, wongeza uAguirre.
Iqela lokuhlangula lifumene inqwelo moya yewele ezimbini ngoLwesine ekuseni.
U-Aguirre uthe inqwelomoya ibibhabha nje okwemizuzu emibini okanye emithathu kwaye ayifikanga kwindawo ephezulu ngaphambi kokuba iwe.
Ngokwengxelo yeendaba zalapha ekhaya, abanye abakhweli ababini ingcali uLuis Charotti kunye nomqhubi wenqwelomoya, uGerardo López.
Inqwelo-moya kuthiwa ihambe ngoLwesithathu nge-6: 22 pm ngexesha lendawo.
Umphathiswa wezoLimo eParaguay uLuis Gneiting kunye nabanye abathathu babhubha xa inqwelo moya yamawele eyayizithwele yaya kwikomkhulu i-Asuncion yangena kumgxobhozo ngoLwesithathu ebusuku, latsho igosa ngoLwesine.
"Kulusizi olukhulu ukuba sibhengeza ukusweleka kwabantu abane kwinqwelo-moya ebenengozi," utshilo uJoaquin Roa, intloko ye-National Emergency Secretariat, esongeza ukuba abasebenzi bakaxakeka ngoku bazama ukubuyisa imizimba kwaye inqwelomoya yahlukaniswa ngokupheleleyo.
"Yonke iPagaguay izilile ngenxa yale ngozi," utshilo u-Mongameli u-Mario Abdo, oza kuthatha isikhundla ngo-Agasti 15. Uxelele oonondaba.